သမ္မတရှီက ဆင်ဟွာသတင်းဌာနတည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၉၀ ပြည့်အခါသမယအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြု - Xinhua News Agency
သမ္မတရှီက ဆင်ဟွာသတင်းဌာနတည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၉၀ ပြည့်အခါသမယအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြု
ပေကျင်း ၊နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ဆင်ဟွာသတင်းဌာန(Xinhua News Agency) တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၉၀ ပြည့် အခါသယအား ဂုဏ်ပြုချီးကျူးသည့် သဝဏ်လွှာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ပြီး တော်လှန်ရေးအမွေအနှစ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာလုံးသော မီဒီယာအင်စတီကျူးရှင်း၏ သတင်းတင်ဆက်မှုပုံစံသစ်အတွက် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ အားစိုက်ရာတွင် သူ၏ အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) ဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဌ လည်းဖြစ်သူသမ္မတရှီက CPC ဗဟိုကော်မတီကိုယ်စား ဆင်ဟွာသတင်းအေဂျင်စီ၏ ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို နွေးထွေးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ရှီက နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ကျရောက်မည့် တရုတ်နိုင်ငံ သတင်းသမားနေ့ (China’s Journalists’ Day) အပေါ် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ သတင်းသမားများကိုလည်း နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်း၏ သဝဏ်လွှာထဲတွင် ရှီက ပြီးခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၉၀ ကြာကာလအတွင်း ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသည် ပါတီအပေါ် မယိမ်းမယိုင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ၊ ပါတီ၏ အကြံပြုချက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျံ့နှံ့စေခဲ့ကြောင်း ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ထင်ဟတ်စေခဲ့ကြောင်း အချိန်ကာလတစ်လျှောက်ဖြစ်စဉ်များကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာပြုခဲ့ကြောင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏အသံကို ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြောင်း သဝဏ်လွှာထဲတွင် မီးမောင်းထိုးဖော်ပြထားသည်။
“ တော်လှန်ရေး ၊ တည်ဆောက်ရေးနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရဲ့ သမိုင်းဝင်အဆင့်တွေမှာ ဆင်ဟွာက သိပ်ကိုအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အားလုံးက လေးစားရသည့် အတော်အသင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသော ခေတ်မီ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကို ဦးတည်သော ခရီးသစ်တွင် ဆင်ဟွာအနေဖြင့် CPC ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်၌ ဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်း ၊ ၎င်း၏ မှန်ကန်သော နိုင်ငံရေးအခြေပြုရပ်တည်ချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားသင့်ကြောင်း ၊ အယူအဆများ နှင့် ခံယူချက်များကို ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်သွားသင့်ကြောင်း ၊ ပြည်သူများနှင့် နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ တော်လှန်ရေးအမွေအနှစ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရင်း သူ၏ အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
ဆင်ဟွာအနေဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအားလုံးသော မီဒီယာအင်စတီကျူးရှင်း ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှု၏ ပုံစံသစ်ကို တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရာတွင် မီဒီယာ၏ ပေါင်းစည်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကို အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီက ဆင်ဟွာသတင်းဌာနအနေဖြင့် တရုတ်လူမျိုးအိပ်မက်၏ နိုင်ငံတော်နုပျိုသစ်လွင်မှု သွေးသစ်လောင်းခြင်း နှင့် လူသားမျိုးနွယ်ကံကြမ္မာ အကျိုးတူအသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်ရေးမြှင့်တင်ခြင်း ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက် ပိုမိုကြီးမားသော ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများလုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ရှီ၏ သဝဏ်လွှာကို ပေကျင်းမြို့၌ စနေနေ့က ကျင်းပသော ဆင်ဟွာနှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတွင် ဖတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် နှင့် CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိရေးဌာနအကြီးအကဲ တစ်ဦးဖြစ်သူ Huang Kunming က တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဆင်ဟွာအနေဖြင့် ရှီ၏ အရေးကြီးသော လမ်းညွှန်ချက်များကို လေ့လာခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်သွားရန် ၊ ပါတီ၏ သီအိုရီသစ်များကို အပြည့်အဝ နှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျံ့နှံ့အောင် ဆောက်ရွက်ရန် ၊ ပါတီ၏ အယူအဆများကို ပြည်သူများအကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိအောင် လုပ်ဆောင်သွားရန် နှင့် ပြည်သူများအတွက် ပြောကြားပေးရန် ၊ သို့မှသာသတင်းဌာနအနေဖြင့် ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သတင်းအောင်မြင်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဆင်ဟွာသတင်းဌာနကို ၁၉၃၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ Ruijin မြို့တွင် အနီရောင် တရုတ်သတင်းအေဂျင်စီ (Red China News Agency) အမည်ဖြစ် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Yan’an တွင် တော်လှန်ရေးအခြေပြုချိန် ၁၉၃၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ မှ စတင်ကာ ၎င်း၏ အမည်ကို Xinhua News Agency အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘာသာစကား ၁၅ မျိုးဖြင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ကို မီဒီယာအင်စတီကျူ့ပေါင်း ၈,၀၀၀ တွင် သတင်းဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်အတူ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဌာနခွဲပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Update: Xi congratulates Xinhua News Agency on its 90th founding anniversary
BEIJING, Nov.6(Xinhua) — Chinese President Xi Jinping has sentaletter congratulating Xinhua News Agency on the 90th anniversary of its founding, urging it to sustain revolutionary legacy, keep its best practices while making innovations to strive foranew type of leading global all-media institution.
Xi, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, extended warm greetings on behalf of the CPC Central Committee to all the members of the news agency.
Xi also extended festive greetings to journalists across the country ahead of China’s Journalists’ Day, which falls on Nov. 8.
In his letter, Xi pointed out that over the past 90 years Xinhua has unswervingly followed the Party, disseminated the Party’s propositions, reflected people’s will, recorded the spirit of the times, and spread China’s voice.
“Xinhua has played important roles in the historical stages of revolution, construction and reform,” he said.
On the new journey toward buildingamodern socialist country in all respects, Xinhua should, under the leadership of the CPC, keep its correct political orientation, stand firm in ideals and convictions, maintain close ties with the people, sustain revolutionary legacy, and keep its best practices while making innovations, Xi said.
He also called on Xinhua to speed up media’s integrated development and strengthen overseas communication, in its efforts to buildanew type of leading global all-media institution.
Xi urged the news agency to make greater contributions to realizing the Chinese Dream of national rejuvenation and promoting the building ofacommunity withashared future for humanity.
Xi’s letter was read ataceremony celebrating Xinhua’s anniversary held in Beijing on Saturday.
Huang Kunming,amember of the Political Bureau of the CPC Central Committee and head of the Publicity Department of the CPC Central Committee, attended the ceremony.
Huang urged Xinhua to earnestly study and implement the spirit of Xi’s important instructions, fully and thoroughly disseminate the Party’s new theories, work to make the Party’s propositions known to the wider public, and speak for the people, so as to better fulfill its duties and make new achievements.
Xinhua News Agency started as the Red China News Agency in Ruijin on Nov. 7, 1931. The agency changed its name to the current Xinhua News Agency in January 1937 when it was in the revolutionary base of Yan’an.
Xinhua now operates over 200 branches both at home and abroad, with its news services offered to 8,000 media institutional subscribers worldwide in 15 languages and covering more than half of the world population.
Photo- Xinhua News Agency headquarter in Beijing (Xinhua)